कुस्तीको नियम राखौँ, जित्नेचाहिँ प्रधानमन्त्री :ओली « LiveMandu
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार २३:३२
पोखरा । आन्तरिक झगडामा रुमल्लिरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई कटाक्ष गरेका छन् । विधी, पद्धती र प्रक्रियाको रटान लगाउनेहरु नै विधी विपरित कार्य गरिरहेको उनको आरोप छ ।
संसद् विघटनपछि नेकपाका एकअर्का पक्षले एकअर्कालाई कारवाही गरिसकेका छन् । तर, वैधानिकता भने कुनैले पाइसकेका छैनन् । आधिकारिक को भन्ने लडाई नेकपामा जारी छ । एकअर्का पक्षले कटाक्ष, आरोप र व्यंग्यवाण प्रहार गर्न छाडेका छैनन् ।
आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखलाकै बीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई आफूले नै कारवाही गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले दाबी गरेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी आफूले नै नोटकपीमा लेखेर दिएको बताउँदै उनले त्यसलाई हटाउन सक्ने चेतावनी दिए । यसको उदाहरणमा उनले देव गुरुङलाई सचेतक पदबाट हटाएको स्मरण गराए ।
यही आधारमा प्रचण्ड नेपाललाई पनि कमिटीबाट हटाउन सक्ने र आफूले अहिले त्यहाँसम्म सोचिनसकेको उनले बताएका हुन् ।
सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मुख्यसचेतक बनाएको थिएँ देव प्रसाद गुरुङलाई अस्तिका दिनमा हटाइदिएँ । मैले बनाएको थिएँ हटाइदिएँ, जरुरी परेको दिन उहाँहरुलाई पनि हटाइदिन्छु । अहिलेसम्म हटाएको छैन । उहाँहरुको पद केही पनि चलाइदिएको छैन ।”
उनले यतिमात्र भनेनन्, आफूलाई पार्टीभित्रैबाट हटाउन यसअघि पनि लागिएको र अहिले पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरु उक्त धन्दामा लागेको उनले बताए ।
“अघिल्लो पटक पनि उहाँहरुले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुभएको हो । हटाउने उनै माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल हुन् । एउटै पार्टीमा बसेर पनि मलाई हटाइहाल्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो,” उनले भने ।
अहिले पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, उक्त निर्णयलाई प्रम ओलीले चुनौती दिए ।
हटाउन सक्ने भए संसदीय दलको बैठक बोेलाइदिने र संसदीय प्रक्रियाबाटै हटाउन चुनौती पनि दिए ।
“अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउनहोस न । कमसेकम कुस्तीमा कसले जित्छ, हार्छ भन्ने नियम राखेर भएपनि हटाउनुहोस् ।
उहाँहरुलाई आफू बलियो छु भन्ने जस्तो लाग्छ, भने कुस्ती खेलेर प्रधानमन्त्री बन्ने नियम बनाउनुहोस्,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने केही आधार पेश गर्न उनले चुनौती दिए । “केही त नियम चाहियो नि । संसदीय नियमाको अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने,” उनको भनाई थियो ।
ओलीले प्रचण्ड– माधव समूहको बहुमत दावी गरे पनि पुष्टि नभएको दावी गरे । “त्यो बहुमत कहाँ पुष्टि भयो ? त्यो पुष्टि भएको छैन । कार्की ब्याङ्केटमा भोज खान बोलाएर भोज खान आएकाहरुलाई म तिर यति मान्छे छन् भनेर हुन्छ ? अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा, महासचिवले बोलाएको बैठकमा आउनुस् न,” उनले भने ।
अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री दिए खान्थेँ भन्ने स्थितिमा पुगेको ओलीले बताए ।